Dhacdo Anfariir Ku Ridday Madaxweynaha Faransiiska Iyo Waxa Ay Tahay Dhacdadaasi – Borama News Network
Dhacdo Anfariir Ku Ridday Madaxweynaha Faransiiska Iyo Waxa Ay Tahay Dhacdadaasi
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa “aad uga naxay” muuqaallada saddex sarkaal oo boolis ah oo magaalada Paris ku garaacay nin madow ah oo fannaan ah sida ay ku warrantay warbaahinta Faransiisku.
Mr Macron si cad ugama uusan hadlin dhacdadan, balse wuxuu kala xaajooday arrintaan iyo kuwa ku lugta lehba Wasiirkiisa Arimaha gudaha Gérald Darmanin.
Saddexda sarkaal ee lagu cadeeyay laguna arkay muuqaalka iyagoo garaacaya Michel Zecler ayaa shaqada laga joojiyay waxaana ku socda baaritaan.
Dhacdadaan ayaa horseedday in baaritaanno cusub lagu sameeyo ciidamada amniga.
Xiddigaha kooxda Kubadda Cagta ee Koobka Adduunka ee Faransiiska ayaa ka mid ah tiro dadweyne ah oo ka hadlay carana ka muujiyay ka dib markii muuqaalladaan laga duubay saraakiishaan booliska ah oo gudaha caasimadda Faransiiska ku garaacaya ninkana madowga ah.
Jimcihii maanta warbaahinta Faransiiska ayaa ku warantay in sarkaal ka tirsan madaxtooyada uu ku tilmaamay Mr Macron inuu ka carooday dhacdadaan ka hor wadahadallada uu la yeeshay Mr Darmanin oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi .
Mr Darmanin wuxuu mar sii horeysay u sheegay telefishanka Faransiiska inuu culeys saari doono si shaqada looga eryo saraakiisha, isaga oo yiri “waxay wasakheeyeen labiskii jamhuuriyada”.
Saddexda sarkaal waxaa hadda ku socda baaritaanno.
Khamiistii la soo dhaafay xiddiga kubada cagta Faransiiska Kylian Mbappé, oo ah madow, ayaa ku biiray dad cambaareyay dhacadaan.
“Muuqaal aan loo dulqaadan karin, rabshad aan la aqbali karin. Maya cunsuriyadda,” ayuu ku qoray bartiisa Twitter-ka isagoo isticmaalay sawir wajiga dhiig ku leh oo ah fannaanka la dhaawacy .
Muuqaalladaan oo ay duubtay kaamiradda amniga ayaa lagu daabacay Khamiistii Websit-ka wararka ee Loopsider. Waxaana ka muuqanayay seddex sarkaal oo haraati, feer la dhacaya fannaanka, wuxuuna sheegay in markii hore loo joojiyay inuusan xirneyn maaskarada wajiga.
Mr Zecler wuxuu sheegay in sidoo kale lagula kacay xadgudub cunsurinimo ah intii lagu guda jiray shanta daqiiqo ee la garaacayay.
Ninkaan oo la xiray waxaa lagu soo oogay dacwdo ah rabshad iyo inuu diiday in la xiro,balse dacwad oogayaasha ayaa meesha ka saaray eedahaas taas badalkeedana waxay fureen baaritaan ka dhan ah saraakiisha lagu eedeeyay falka garaaca ah .
Markii uu tagay xarunta booliska maalintii khamiista isaga iyo qareenkiisa si uu dacwad u gudbiyo, Mr Zecler wuxuu u sheegay wariyeyaasha in “dadkii ilaalin lahaa isaga inay dhibaateynayaan . Wuxuuna sheegay in waxa kaliya ee uu doonayo ay tahay in seddexda sarkaal sharciga la marsiiyo.
Duqa magaalada Paris Anne Hidalgo ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday falkaan kuna tilmaantay ” Fal aan loo dulqaadan karin”.
Dhanka kale, dowlada faransiiska ayaa sii wada xoojinta hindise sharciyeedkeeda amniga ee muranka dhaliyay, kaas oo dadka kasoo horjeeda ay sheegeen inuu wiiqi karo awooda warbaahinta ee ah inay baaraan habdhaqanka booliska.
Qodobka 24-aad ee hindise-sharciyeedka ayaa dambi ka dhigaya in la soo dhigo sawirrada booliska ama askarta baraha bulshada kuwaasoo loo arko inay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan.
Dowladda ayaa ku doodeysa in sharciga cusub uusan qatar gelin doonin xuquuqda warbaahinta iyo muwaadiniinta caadiga ah ee soo gudbinta xadgudubyada booliska.
Balse markii ay dhaleeceynta kala kulantay dowladdu sharcigaan waxey sameeysay wax ka badal, iyada oo sheegtay in Qodobka 24-aad uu kaliya bartilmaameed ka dhigan doono faafinta sawirrada si cad loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo sharafta booliska ama naftdooda.
Dadka lagu helo dambiga waxaa lagu ciqaabi karaa sanad xarig ah ama ganaax lacageed oo gaaraya €45,000 .
Khabiirkii Nukliyeerka Dowlada Iiraan Oo La Dilay Iyo Ciidamo Ingiriis Ah Oo Ilaalin Doona Xarumaha Shidaalka Sucuudiga
Milatariga Dowlada Itoobiya Oo Guulo Ka Sheegtay Dagaalka Gobolka Tigreyga
” Wasiir Saajin Intuu Murashaxiinta Xidhaxidhayo Muxuu Sheekh Xasan Deheeye U Qaban Waayay” Faysal Cali Waraabe
Bnnstaff Bnnstaff May 3, 2021
Dowlada Maraykanka Oo Cunaqabatayn Dhaqaale Ku Soo Rogtay Somaliya
Bnnstaff Bnnstaff April 29, 2021
Madaxwayne Muhammadu Buhari Oo Ku Dhawaaqay Howlgal Lagu Soo Afjarayo Budhcadda ka howlgasha dalkiisa
Bnnstaff Bnnstaff October 19, 2021